Mankalazà ny 4 Jolay ao New York | Vaovao momba ny dia
El 4 of July of 1776, solontena avy amin'ny zanatany anglisy telo ambin'ny folo no nankatoavin'ny Fanambarana ny fahaleovan-tena, izay tonga, ny daty ofisialy nahaterahan ny Etazonian'i Amerika amin'ny maha firenena. Nihaona ireo raim-pianakaviana, anisan'izany i Benjamin Franklin na Thomas Jefferson Philadelphia, fa any New York indrindra no ahafahanao miaina ny fankalazana an'ity tsingerintaona ity.
Ny 4 Jolay dia fetim-pirenena ho an'ny vahoaka amerikana, io no andro izay nanehoan'ny hafanam-po ny fitiavan-tanindrazana avo sy ny fanoloran-tena ho an'ny kintana sy ny dian-kapoka mahatratra ny endriny avo indrindra. Haingo daholo ny toerana rehetra, ary tsy ho latsa-danja ny New York. Notsiahivina ny faha-4 Jolay iray amin'ireo trano fivarotana afomanga mahatalanjona indrindra hahafahanao misaintsaina ny fiainanao.
Ny rojo fivarotana malaza Mpanohana an'i Macy amin'ity seho 30 minitra eo ho eo ity, izay matetika misy lohahevitra hafa isan-taona, ary izany no mahatonga azy tsy ampoizina foana. Hatramin'ny 1958, dia may ny afo avy amin'ny teboka maro samihafa, matetika manerana ny Ony Hudson, saingy avo loatra ka tsy tazana avy amin'ny ankamaroan'ny tanàna araka izay tratra. Ankehitriny, hiresaka momba ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra hahitantsika azy isika.
Tsy isalasalana, ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra hankafizana afomanga dia ao amin'ny zaridainan'i Nosy Governors, fa misy koa ny Valan-javaboahary Hudson, na avy amin'ny sisin'ny New Jersey. Miankina amin'ny teboka marina nanombohana ny afo sy ny fahatongavanao teo am-piandohana izany, satria hisy olona an-tapitrisany toa anao hanana tanjona mitovy.
Amin'ny maha fialantsasatra ampahibemaso, mihidy ny ankamaroan'ny toerana. Ny 4 Jolay dia tsy andro fitsangatsanganana, Andro iray hahatsapana ho New Yorker iray hafa, mandeha Central Park hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny farany, ary mamarana ny andro amin'ny fitsangatsanganana eny amin'ny zaridainam-panjakana rehetra. Mazava ho azy, ny andro alohan'ny vanim-potoanan'ny fety dia efa niainana, ary tena azo atao ny mahita tolotra fizahan-tany sy fihenam-bidy tsara any amin'ny magazay.
Izy io koa dia daty tena manandanja hitsidihana ny tanàna sy Etazonia, koa manentana anao aho mba hanomana mialoha ny zava-drehetra, raha tsy izany dia te ho lany toerana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Mankalazà ny 4 Jolay ao New York
Major Airlines an'ny Oseania